Dhammaan aaladaha ka hor tagga uurku waxay kaa ilaalinayaan in aad qaaddo uur aadan doonayn.
Kondhomtu waxay kaloo dheertahay in ay cudurradana kaa ilaalineyso. Wiilasha marka la eego fursadda keliya ee u bannaan weil waa kondhomta. Laakiin gabdhuhu fursado badan oo ay kala dooran karaan ayay haystaan.
Kaniinka P-pillen waa habka ka hor tagga uurka ee ugu caadisan uguna faca weyn. Gabdhaha badankoodu marka ugu horreysa ee ay aalad ka hor tag isticmaalayaan waxay doortaan kaniinka p-piller. Nidaamkan ka hor tagga uurku wuxuu ku habboon yahay kuwa xasuusta in ay maalin walba kaniiniga qaataan.